साताको तस्वीर : जीर्ण गल्कोट दरबार ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : जीर्ण गल्कोट दरबार !
२०७४ मंसिर ९, शनिबार २१:२१	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र, विविध
गल्कोट, २०७४ मंसिर ९ । गल्कोट दरबार जीर्ण अवस्थामा छ । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुको आकर्षणको केन्द्र रहेको गल्कोट दरबार मरमत सम्भारको कमीले दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै भग्नावशेषको अवस्थामा रुपान्तरित बन्न पुग्दा सम्म यसको संरक्षणमा सरोकारवाला तथा राज्य पक्षले चासो नलिँदा जिल्लाकै ऐतिहासिक एवं राजनीतिक धरोहरको रुपमा रहेको गल्कोट दरबारको अस्तित्व संकटमा परेको धेरैले महसूस गरेका छन् ।
गल्कोट दरबारको संरक्षणमा राजपरिवारका सदस्यहरुबाट चासो नलिईनु पछीको कारण जे जसो भएनि जिल्लाकै ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा उभिएको गल्कोट दरबारलाई ढल्न नदिन सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ । यस क्षेत्रका नागरिकहरुको चाहनालाई कदर गर्दै जति सक्दो छिटो दरबारको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
केहि वर्ष अघिसम्म गल्कोट राज्यको राजधानी रहेको हरिचौर मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणले ओझेलमा परेको छ । मानिसहरुको चहल पहल कम रहेपनि गल्कोट राज्य*को चिनारीको रुपमा उभिएको गल्कोट दरबार अबलोकन गर्न आउनेहरुले गर्दा हरिचौर गुल्जार बनेको छ । यसलाई ढल्न दिनु हुन्न, भन्ने हरिचौर लगायत यस भेगका जनताको यो चाहना छ र उनिहरुले राजपरिवारका सदस्यहरुलाई यसको समुचित व्यवस्थाका लागि घच्घचाई रहेका छन् ।
माथीका तस्वीरहरु विद्यामन्दिर उमावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा दीपा पाण्डेले खिचेकी हुन् ।
* गोर्खाका राजा रामशाहको गल्कोटसंग बैबाहिक सम्वन्ध भएकाले तत्कालीन अवस्थामा गल्कोटको विशेष स्थान रहेको बुझिन्छ । राजा प्रतापी नारायण मल्ल सँगै तप गरेर सिद्धी प्राप्त गरेपछी राजा राम शाहले वरपरका राजाहरुलाई गल्कोटमा उपस्थित गराई राज्य संचालनका लागि विभिन्न स्थिति कायम गरेको घोषणा गरेका थिए । यस कारण पनि गल्कोट राज्यको विशेष महत्व रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
थप तस्वीरहरु :
यो हरिचौरको तस्वीर २०७३ साल साउन महिनामा फोटो संपादक किरण आचार्यले खिचेको हो ।
* संक्षेपमा गल्कोट राज्य
गल्कोटका अन्तिम राजा भरतबम मल्ल र उनकी रानी ।
बाईसी/चौबीसी राज्यकालमा अस्तित्वमा रहेको गल्कोट राज्य पर्वत राज्यको एक अंग थियो । पर्वते राजाहरुको वंशावली अनुसार राजा प्रतापी नारायण मल्लले आफ्ना तीनभाई छोराहरुलाई राज्य बाँड्दा (अंश दिँदा)जेठा छोरा जितारी मल्ललाई गल्कोट, माहिला राज मल्ललाई पर्वत र कान्छालाई कास्की राज्य परेको थियो ।
गल्कोट राज्यमा राजा जितारी मल्ल पछी क्रमश: पार्थिव मल्ल, विभू मल्ल, श्रीपति मल्ल, श्रीदत्त मल्ल, पृथ्वीपति मल्ल, नारायण मल्ल, श्री निवास मल्ल र जगत मल्ल राजा भएका थिए । बिसं १८४३ मा पाल्पा पछीको शक्तिशाली पर्वत राज्यमाथी गोरखाली सेनाले विजय प्राप्त ग-यो भने बिसं १९४४ मा गल्कोट राज्यमाथी बिजय हासिल गरेको थियो । गल्कोट राज्य माथी गोरखाली सेनाले बिजय प्राप्त गर्दा गल्कोटमा जगत मल्ल राजा थिए ।
गल्कोट राज्य विशाल नेपालमा विलय भएपछी सत्ताच्यत भएका राजा जगत मल्लले तत्कालीन नेपाल सरकारसंग अननयविनय गरेपछी केहि जग्गा बिर्ता पाएका थिए । पछी यिनका पलाती पृथ्वीबम मल्लले श्री ३ जंगबहादर राणाको आदेशले बिसं १९११/१२मा भएको नेपाल-तिव्वत युद्ध र बिसं १९१४ मा भारतमा भएको बिद्रोह दबाउन पल्टन खडा गरी सहयोग पुराए बापत यिनलाई श्री ३ जंगबहादरले राजाको पगरी प्रदान गरेका थिए । यिनी पछी यिनका छोरा ललित बम मल्ल राजा भएकै बखत राजाको पगरी जफ्त गरिएको थियो र पछी नारायण मल्लको समयमा फुकुवा गरिएको थियो । यिनको निधन पछी बिसं १९६९ को बाली देखी यिनका छोरा भरत बम मल्लका नाममा थामिएको थियो । बिसं १९९७ बैशाख ९ गते श्री ३ जंगबहादर राणाले राजा भरत बम मल्ललाई थप बिर्ता सहित राजाको श्री पेच (पगरी) लाउन पाउने गरी प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक अधिकार दिएका थिए । यिनी बिसं २०१७ साल सम्म गल्कोटका राजा भए । (१)
यिनका छोरा थीरबम मल्ल २००७ सालको राणा शासन बिरुद्धको क्रान्तिमा वीरगन्जमा शहीद भएका थिए भने अर्का नाती माधवबम मल्ललाई जनयुद्धकालमा माओवादीव्दारा हत्या गरिएको थियो ।
** गोर्खाका राजा रामशाहको गल्कोटसंग बैबाहिक सम्वन्ध थियो । राजा प्रतापी नारायण मल्ल सँगै तप गरेर सिद्धी प्राप्त गरेपछी राजा राम शाहले वरपरका राजाहरुलाई गल्कोटमा उपस्थित गराई राज्य संचालनका लागि विभिन्न स्थिति कायम गरेको घोषणा गरेका थिए । यस विषयमा गोर्खाका राजाहरुको बंशावलीमा लामो वर्णन गरिएको छ । गोर्खामा राम शाह राजा भएपछी उनको विवाहाका लागि कन्या खोजी गर्दा पर्वतका राजा राज मल्लकी राजकुमारी सर्वगुण सम्पन्न सुयोग्य मानिएपछी राजा रामशाह राजकन्या माग्न पर्वत आउदा राजा राज मल्लले अनादर गरेकाले रिसाएका राजा राम शाह गोर्खा फर्किन लागेको थाहा पाएपछी गल्कोटमा रहेका राजा प्रतापी नारायण मल्लले राजा राम शाहलाई भेटेर आफु संगै रहेकी आफनी भान्जी मुसिकोटे राजाकी राजकन्या संग विवाह गर्न प्रस्ताव गरे । राजा राम शाहलाई राजकन्या उचित लागेपछी उनको त्यहिँ बिबाह सम्पन्न भयो ।
राजा प्रतापी नारायणले राजा राम शाहलाई राज्य शक्ति बृद्धिकालागि तप गर्न सल्लाहा दिए । राजा राम शाह त्यस्को निम्ति तत्कालै तयार भएको देखेपछी प्रतापी नारायण मल्लले यो तप गर्ने बेला होईन भरखर बिबाह भएको छ । पछि उचित समय आएपछी खबर गर्छु र आउनु भनेपछी चतुर्थी मनाएर राम शाह गोर्खा फिरेका थिए ।
त्यस्को केहि समय पश्चात राजा प्रतापी नारायण मल्लले चिठी लेखी राजा राम शाहलाई तपका लागि गल्कोट बोलाएका थिए । तपका अवसरमा राजा प्रतापी नारायण मल्लले राजा राम शाहलाई बिभिन्न कथाहरु सुनाएर उनलाई उत्प्रेरि गरेका थिए । दुबै राजाहरु ६ महिना कडा तप गरेपछी उनिहरुलाई सिद्धी प्राप्त भएको थियो । सिद्धी प्राप्ती पछी राजा राम शाहले वरपरका राजाहरुलाई गल्कोटमा उपस्थित गराई राज्य संचालनका लागि विभिन्न स्थिति कायम गरेको घोषणा गरेका थिए । (२)
प्रस्तुति : ईबागलुङ डेस्क, बागलुङ ।
१) गल्कोट राज्यको इतिहास विगत देखी वर्तमान (कार्यपत्र)
कृष्ण प्रसाद गौतम, प्राचार्य/प्राध्यापक
गल्कोट बहुमुखी क्याम्पस, हटिया
२०७४, गल्कोट ।
२) हिस्ट्री अफ नेपाल
सन २०७१, भारत ।
जानकारीका लागि ‘हिस्ट्री अफ नेपाल’ बाट
निर्वाचन पर्यवेक्षणको भूमिका सी सी टिभीको जस्तो हुन जरुरी : पण्डित
चुनावको मुखमा बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतमा १ हजार रुपयाँको नक्कली नोटको बिगबिगी !